20 Top 2019: "PornHub waxay ku taallaa booska 8e, Xvideos.com ee 12e, iyo Xnxx.com at 13e. Netflix waxay galaan goobta 17e, iyo Reddit, 20e. "
ACCUEIL » kale 20 Top 2019: "PornHub waxay ku taallaa booska 8e, Xvideos.com ee 12e, iyo Xnxx.com at 13e. Netflix wuxuu galayaa 17th, Reddit wuxuu galayaa 20e. "
Taasi waa waxa internetka u eg yahay 2019
Immisa qof oo Faransiis ah oo ku jira shabakadaha bulshada? Imisa qof ayaa ku xiran adduunka? Yaa leh xisaabta ugu weyn ee Twitter? Waa maxay saamiga mobile? Warbixinta Global Digital 2019 waxay na siisaa tilmaamayaasha muhiimka ah si loo fahmo waxa internetka maanta u eg yahay.
Internetku waa balaayiin koobi ah oo xog ah, laakiin sidoo kale tiro badan oo fudud. Lambarradani waa waxa ka soo baxa Global Digital Report 2019 ee daabacay by We Are Social iyo Hootsuite. Waxaan baraneynaa in ay hadda jiraan Isticmaalayaasha bilyan ee 4,39, laga bilaabo 367 million (+ 9%) sanadka. Guud ahaan 11 dad cusub waxay isku xiraan ilbiriqsi kasta, iyo Hindiya waa guusha wayn: tirade dadka Hindida Hindida ah waxay ku soo bateen qiyaastii 100 tan iyo bishii Jannaayo 2018, korodhka 20%.
Dhinaca miisaanka, waxaan ogaannay in Meelaha 3 ee dadka waaweyn ayaa ka muuqda 20 ee ugu sareeya goobaha ugu booqashada adduunka : PornHub waxay ku taallaa booska 8e, Xvideos.com ee 12e, iyo Xnxx.com at 13e. Laba "yaryar" cusub oo cusub sanadkan: Netflix, oo gelaya booska 17e, iyo Reddit, 20e.
Kooxda Facebook, farshaxanada, muusikada, jilayaasha, ama kooxaha isboortiga ayaa hogaaminaya rikoodhka boggaga ugu horeeya ee 20. Saddexda magacood ee kaliya ee soo socda ayaa ah Samsung, Coca-Cola iyo McDonald's. On Insta, waxay yihiin kaliya 2, Nike iyo National Geographic. Kardashan, waxay yihiin 4 inay joogaan 20 sare !
Comment améliorer votre mémoire (même si vous ne pouvez pas trouver les clés de votre voiture) – New York Times
Ninka waalidku wuxuu kufaraxsan yahay inuu soo tuuro jimicsiga - xnxx